Xiddigaha ugu xawaaraha badan horyaalka Bundesliga tan iyo markii xog uruurintiisa la bilaabay oo la shaaciyey… (Ka bogo 10-ka sare) – Gool FM
(Munich) 28 Maajo 2020. Waxaa la shaaciyey ciyaaryahanka ugu xawaaraha badan horyaalka Bundesliga Jarmalka tan iyo markii xog uruurintiisa la bilaabay.
Laacibka Kooxda Borussia Dortmund ee Achraf Hakimi ayaa loo magacaabay inuu yahay ciyaaryahanka haysta rikoorka xiddiga ugu xawaaraha badan horyaalka Bundesliga, iyadoo ciyaaryahanka amaahda kaga maqan Real Madrid uu muujiyey markii saddexaad xilli ciyaareedkan in waji cusub uu kaga soo muuqday liiska 10-ka sare.
Horyaalka Jarmalka ayaa xog uruurintiisa la bilaabay kal ciyaareedkii 2011-12, waxaana tan iyo markaas xiddigaha ugu xawaaraha badnaa horyaalka ku jira weeraryahanka hadda ka tirsan Arsenal horayna ugu ciyaari jiray Dortmund ee Pierre-Emerick Aubameyang, waxaana uu ka soo muuqday kaalinta 7-aad.
Hakimi weli waa 21-sano jir waxaana intii lagu guda jiray kulankii barbaraha 3-3 ku dhammaaday oo ay garoonkooda kula ciyaareen RB Leipzig uu ku orday xawaare dhan 22.49mph oo u dhiganta 36.20 km/h, sida uu warinayo website-ka rasmiga ah ee horyaalka Bundesliga.
Haddaba halkaan hoose ka eeg 10-ka xiddig ee ugu xawaaraha badan horyaalka Bundesliga tan iyo xilli ciyaareedkii 2011-12 & Xiddig waliba inta uu ku orday:-